Lasa fanevatevàna ao Bolgaria ny teny hoe “karazana” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Aogositra 2019 7:22 GMT
Vakio amin'ny teny Shqip, Español, Français, Ελληνικά, Italiano, عربي, English
Gazety Bolgara mampiasa ny teny hoe “karazana (lahy sy vavy)” (джендър) amin'ny fomba samihafa : ny dikany amin'ilay teny, avy amin'ny gazety mpisary adala Telegraf ary amin'ny fomba manesoeso nataon'ny Pras Pres. Sary an'ny Global Voices, CC-BY.
“Manabe ny zanany toy ny karazana (джендър) i Charlize Theron,” hoy ny lohateny lehibe amin'ny dika an-tsoratr'ilay gazety bolgara mpisary adala Telegraf tamin'ny 20 Aprily, naseho etsy ambony. “Misy karazana iray mahatonga ireo atleta hisafoaka,” hoy ny lohatenin’ny lahatsoratra iray ao amin'ny Classa.bg momba ilay mpibata fonjamby nanova taovam-pananahana izay hita etsy ambony ihany koa.
Ao Bolgaria, toy izany izao no ampiasàna ny teny anglisy hoe “gender” (karazana) amin'ny fandikàna azy mivantana ho (джендър) : ho entina manao tsinontsinona ireo vitsy an'isa sy ireo olona izay tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ny karazany. Matetika ampiasaina ihany koa io teny io mba hampihenàna ny lanjan'ireo feminista sy mpiaro zon'olombelona.
Raha mandre olona miteny ny fiteny Bolgara ianareo ka misy olona iray eo mampiasa fotsiny eo ny teny hoe “lenta na karazana” ka manontany tena ianao hoe tena matotra ve sa vazivazy.
Misy lahatsoratra nivoaka tamin'ny fanontàna tamin'ny 17 Aprily tao amin'ilay gazetiboky mpisary adala ao an-toerana Pras Pres, nosoratan'i Emil L.Georgiev ary nitondra ny lohateny hoe “Tsy milavo lefona ny karazana (ary) mitohy ny tolona” (Джендърът не се предава но борбата продължава), miresaka ny fampiasana vao haingana io teny io.
Atahoranareo ve ny teny hoe “kazarana,” io kalo masiaka io, ilay manana taova maro sy mifanohitra amin'ny lalàm-panorenana niandohana tao eoropa andrefana, teraka tao Istanbul ? Nalefa aty amin'ny firenentsika ilay izy ary misy iraka miafina ampanaovina azy, ny hisovoka any am-pandrian'ireo ankohonana bolgara marintoerana, rehefa alina ny andro, mba hamotehana azy ireny sy hanovàna azy tsy ho araka ny tokony ho izy. Mampahatahotra izy saingy hatreto – raha tombanana – dia mbola voafehin'ireo hery mahay mandanjalanja, soloin'ny filoham-pirenena tena, ny eglizy ortodoksa ary ny antoko sosialista bolgara sy ampahany betsaka amin'ny Fitsaràna ny lalàm-panorenana ary fikambanana ampolony maro sy ireo orina tia tanindrazana sy ara-pinoana . Satria tsy hilavo lefona mora fotsiny amin'izao “ny karazana”.
Tany amin'ny andian-tanoa 1990 tany, nitoloman'ireo Bolgara mpiaro ny vehivavy ny mba hampiasana ny fomba fiantso bolgara amin'izao fotoana izao hoe “karazana” (род) ho solon'ilay amin'ny teny anglisy, saingy toa ity farany, miaraka amin'izay sarintsarin-teny manambany miaraka aminy, no nifàka lalina teny anaty fampahalalambaovao sy ny fitambaramben'ny fiarahamonina. Ilay fiteny aza toa hita mihitsy any anaty fampidirana momba ny “karazana” ao amin'ilay pejy Wikipédia amin'y fiteny bolgara.
Eny tokoa, ny fampiasàna ilay voambolana amin'izay lalankevitra izay dia manome taratra fankahalàna ireo mpifankatia mitovy taovam-pananahana sy ireo tsy lahy tsy vavy mihamitombo be ao Bolgaria, toy ny fitontoganana be amin'ny toedraharaha raha resaka fomba fitondra ireo olona LGBTQ+ sy indrindra fa ho fanajàna ireo zo maha-olona any amin'ireo firenena – izay toerana niavian'ireo hetsika nasiônalista nanjohy ny fiarahamitantana teo amin'ny fitondrana tamin'ny taona 2017. Nanmboka teo, ny Praiminisitra Boyko Borissov [fr] avy amin'ny antoko afovoany-havanana GERB dia nifanome tànana taminà antoko telo nasiônalista avy amin'ny farany havanana izay mitonona ho Tia Tanindrazana Mitambatra [fr]. Afangaron'ny fandaharanasan-dry zareo ny fifikirana amin'ny nentindrazana sosialy sy ny nasiônaly, ny “populisme” an'ny elatra faran'ny havanana, ny “euroscepticisme”, ny fanoherana ny fanatontoloana, ny fankahalàna silamo ary ny fankafizana ny rosiàna.
Araka ny lahatsoratra iray nivoaka tao amin'ny Pras Pres, betsaka ireo sariitatra mankahàla pelaka navoaka nandritra ny fampirantiana nasiônaly faha-44 ho an'ireo sariitatra izay nanomboka tamin'ny 1 Aprily tao Sofia renivohitra. Mbola io volana io ihany, nisy manampahefana avy amin'ny antoko sosialista bolgara sy ny antokon'ny hery ankavanana VMRO BND (mpikambana ao anatin'ny Tia Tanindrazana Mitambatra) nanandrana ny hampandràra ny fampirantiana sary nomena lohateny hoe “Balkan Pride” [Reharehan'i Balkàna] tao an-tanànan'i Plovdiv, izay miaraka mandray amin'i Matera any Italia ny andiany 2019 amin'ny renivohitra ara-kolontsaina eoropeàna. Nangatahan-dry zareo ny filankevitry ny tanàna mba handroaka an'i Svetlana Kuyumdjieva, tale misahana ny zavakanto ao amin'ny orina najoron'ny fanjakana hiatrehana ilay fetibe, saingy tsy tanteraka. Ny 8 Aprily, nambarany nandritra ny antsafa iray tamin'ny fahitalavitra fa hisy soa amantsara araka ny efa nandaminana azy ilay fampirantiana.
Nefa ny mety haneho tsara ny fankahalàna pelaka tsy mitsahatra mitombo ao Bolgaria dia ny fandàvan'io firenena io ny hanoratra ao anatin'ny lalàny ny momba ireo fotokevitra napetraky ny fifanarahana tao Istambul. Ny Fifanarahana Istanbul [fr] dia ny “Fifanarahan'ny Filankevitr'i Eorôpa momba ny fisorohana sy ny ady atao amin'ny herisetra manjo ireo vehivavy ary ny herisetra an-tokantrano” ary tamin'ny 2011 izy io no nosoniavin'ireo firenena eorôpeàna niisa 46, anisan'izany i Bolgaria. Tao anaty didim-panjakana navoaka tamin'ny 2018, ny Fitsaràna momba ny Lalàm-panorenana bolgara dia nanapaka hevitra tamin'ny isa 8 nandàny raha 4 kosa nitsipaka fa ireo fotokevitra avy amin'ny Fifanarahana dia tsy araka ny lalàm-panorenana noho ny famaritany ny teny hoe ‘karazana’ ho toy ny zavatra noforonin'ny fiarahamonina manafosafo fotsiny ny sisintany manasaraka ireo karazana roa efa misy – lahy sy vavy – efa voapetraka ara-biolojika.”
Ao anatin'ny tatitra navoakany ho an'ny taona 2018, ny Komity Helsinki bolgara, fikambanana tranainy indrindra mpiaro ny zo maha-olona ao amin'ny firenena, no manasongadina ireo dona ara-piarahamonina ateraky ny fanapahankevitry ny Fitsaràna momba ny Lalàm-panorenana :
Iray amin'ireo tanjon'ny fanentanana lehibe hanoherana iay Fifanarahan'i Istambul ny fanilihana ny fiarovana an'ireo olona tsy manambady ny hafa karazana aminy sy ny nanova fananahana amin'ny herisetra an-tokantrano sy mifototra amin'ny fironana ara-pananahana izay iantohan'ny fanamafisana ilay Fifanarahana. Niseho tamin'ny endrika hafahafa sy tsy nampoizina izany tamin'ilay didin'ny Fitsarana momba ny Lalàm-panorenana nilaza ny tsy maha-araka ny lalàm-panorenana ny mety hisian'ny lalàna iray amin'ny hoavy hametrahana amin'ny toerany ny fepetra iray hanovàna ny karazana any anatin'ireo antontan-taratasy famantarana ireo olona nanaova fananahana, didy iray tsy mahazo ny fanohanan'ny Lalàm-panorenana.
Fanolorana ilay tatitra ho an'ny taona 2018 nataon'ny Komity Helsinki ao Bolgaria, tao Sofia tamin'ny 23 Aprily 2019. Sary an'ny BHC, CC-BY.
Tsipihan'ilay tatitra ihany koa ny hoe, nandritra ny tapany faharoa tamin'ny taona 2018, marobe ireo fanovàna natsofoka tao anatin'ny lalàna no niteraka fanohintohinana ny fahalalahana maneho hevitra, ny fahafahana manao fivoriana sy ny fahalalahana ara-pinoana, ny fiarovana ny vehivavy, ny zon'ireo olona LGBT+, ireo Roms, ireo mpialokaloka ary hatramin'ireo olona nahiboka any anaty toeram-pitsaboana aretin-tsaina sy toerana hafa famonjàna.
Raha aravona, ny filaza hoe ‘karazana’ amin'ny fanekena ilay heviny manambany dia tsy manao afatsy ny manjohy ireo lisitra midadasika misy ireo teny fankahalàna ampiasaina hamelezana ireo mpiaro zon'olombelona sy ireo mpikatroka avy amin'ny fiarahamonina sivily.
Hita any anatin'ireny fiteny ireny ihany koa ny “liberasti” (либерасти), fanambatambarana ireo dika bolgara ho an'ny teny hoe “liberaly” sy “pédé”, na ihany koa “Sorosoidi” (Соросоиди), teny iray fanambaniana (angamba nipoitra avy any Makedonia Avaratra) apetaka amin'izay rehetra mikolokolo fifandraisana amin'i George Soros, ilay amerikàna mpitia ny mpiara-belona ary manana fiaviana Hongroà .
Belarosia 6 andro izay